ဘယ် Keyboard ကိုနှင့်မောက်ငါ့ PC အတွက် Buy သင့်သ? - သတင်း Rule
ဘယ် Keyboard ကိုနှင့်မောက်ငါ့ PC အတွက် Buy သင့်သ?
မားမီပိုကောင်းတစ်ခုခုနှင့်အတူသူမ၏ဟောင်းကီးဘုတ်နဲ့မောက်စ်ကိုအစားထိုးချင်ပါတယ်. ရွေးချယ်စရာများများရှိပါတယ် …
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “ဘယ်ကီးဘုတ်နဲ့မောက်စ်ကိုငါ PC အတွက်မဝယ်သင့်တယ်?” ဂျက် Schofield ကရေးသားခဲ့သည်, ကြာသပတေးနေ့ 13 အောက်တိုဘာလအပေါ် theguardian.com များအတွက် 2016 08.55 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ငါ့အဒဲလ်က desktop ရဲ့ကြိုး optical mouse ကိုနှင့်ကီးဘုတ်ကိုသွားအတွက်အနည်းငယ်ရှည်လျားလာပြီဖြစ်ကြောင်း, ငါသည်လည်းထိုနေရာတွင်အစားထိုးချင်ပါတယ်. သင်ဘာကိုအကြံပြုချင်ပါလဲ? ဒါကြောင့်တန်ဖိုးရှိကြိုးမဲ့ကိရိယာ Are, ဒါမှမဟုတ်သင်အစဉ်မပြတ်သူတို့ကိုအားသွင်းခြင်းနှင့်အဆုံးမဲ့ဘက်ထရီကိုအစားထိုးဖို့လို? ငါမထိ-type အမျိုးအစားနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါ့ကျွမ်းကျင်မှုအနည်းငယ်သံချေးတက်နေကြသည်. မားမီ
keyboards တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအရသာတစ်ခုကိစ္စဖြစ်ကြောင်း, နှင့်လေ့အသုံးပြုမှုအများအပြားကန့်ကွက်အောင်မြင်သော. တစ်နည်းပြောရရင်တော့, သငျသညျလုံလောက်တဲ့ကြာကြာတစ်ဦးချို့ယွင်းချက်ကီးဘုတ်ကိုသုံးလျှင်, သင်ကရန်အသုံးပြုရလိမ့်မယ်. သင်ပင်ကကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းငှါလာကြစေခြင်းငှါ.
ယဘေုယ်ရန်, သုံးအဓိကအရသာရှိပါတယ်, သူတို့ကိုအကြားအချို့ထပ်နေနှင့်အတူ. ဤအရာများသည်: အစဉ်အလာ keyboards, အထီးကျန် keyboards, နှင့်အကိုက်ညီ keyboards.
တစ်ဦးထိတွေ့စာစီစာရိုက်သူအဖြစ်, ငါခရီးသွား၏ click နှိပ်ပြီးကြောင်းစက်မှုခလုတ်များကိုအတူအစဉ်အလာကီးဘုတ်တစ်ခုကြီးမားသောပန်ကာရယ်နှင့်ရှိစာရေး. ဒါကအကြံပေးအဖွဲ့တူတည်ဆောက်ခဲ့သည့်ရှေးဟောင်းဖြောင့်မတ် Remington အပေါ်ကိုရိုက်ထည့်ဖို့သင်ယူပြီးမှထံမှလာ, ထို့နောက်တစ်ဦးက IBM မော်ဒယ် M ကိုအတူဆယ်စုနှစ်၏စုံတွဲတစ်တွဲသုံးစွဲ, အချို့ပြောဆိုချက်ကိုအစဉ်အဆက်ကိုဖန်ဆင်းအကောင်းဆုံးကီးဘုတ်ဖြစ်ပါသည်.
အခြားလူအနည်းငယ်သာခရီးသွားရှိသည်သောပြားချပ်ချပ်သော့များနှင့်အတူအထီးကျန် keyboards ၏ညီအမျှကြီးမားသောပရိတ်သတ်များများမှာ. ဤရွေ့ကားပထမဦးဆုံးဆိုနီလက်တော့ပ်ပျေါမှာထငျရှား (သင်ရေတွက်ချင်မဟုတ်လျှင် Sinclair Spectrum ရဲ့ "သေလွန်သောသူတို့သည်အသားကို" ဗားရှင်း), ဒါပေမဲ့ Apple က၎င်း၏ All-In-One Macs များအတွက်ဒဏ်ငွေလူမီနီယံဥပမာအားထုတ်လုပ်.
ကီးဘုတ်ကမ္ဘာသွားရာလမ်းအကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမသံသယရှိပါတယ်. စက်မှုကီးဘုတ်ထုတ်လုပ်နေရတယ်လို့နှင့်စျေးကြီးတယ်. အထီးကျန်ကီးဘုတ်အများကြီးသေးငယ်များမှာ, စေနှင့်အလွန်စျေးပေါ. သူတို့ကစက်ပိုင်းဆိုင်ရာကီးဘုတ်ထက်ပင်ပိုမိုပါးလွှာဖြစ်ကြောင်းကို laptops တွေအတွက်စံပြပါပဲ. သို့မဟုတ်ပင် on-screen keyboard ကို - - လူအများစုဟာယခုဤသူအထီးကျန်ကီးဘုတ်ပေါ်ရိုက်ထည့်ရန်သင်ယူဒါကြောင့်သူတို့ကိုငါလူတိုင်းနီးပါးရဲ့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်လာရန်မျှော်လင့်ထား.
မည်သို့ပင်ဆိုစေ, စက်မှုကီးဘုတ်ဆဲလူကြိုက်များနှင့်တွေ့ပါရန်လွယ်ကူပါတယ်, သငျသညျဖန်စီ Multi-အရောင်အလင်းရောင်သက်ရောက်မှုများကန့်ကွက်ကြဘူးအထူးသဖြင့်လျှင်. သူတို့ကအသကျရှငျ byPC ဂိမ်းကစားထားရှိမည်လျက်ရှိသည်, အဘယ်သူကိုအဘို့အလျင်မြန်သောတုံ့ပြန်မှုနဲ့ N-key ကိုစာမျက်နှာပေါ်တွင်မြှားရွှေ့တဲ့ကိစ္စဖြစ်ကြောင်း (ကို virtual) ဘဝနှင့်သေခြင်း.
ကီးဘုတ်နှစ်ခုလုံးအမျိုးအစားများနှင့်အတူအဓိကအားနည်းချက်သူတို့ကိုသင်အသုံးပြုရန်သင်၏လက်ကောက်လိမ်ဖို့ရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်. အကောင်းဆုံးကတော့, သင့်ရဲ့လက်ကောက်သင့်ရဲ့လက်နက်နှင့်အညီဖြစ်သင့်. အဆိုပါအကိုက်ညီဖြေရှင်းနည်းအသီးအသီးလက် keys ကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အစုံရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကီးဘုတ်ကိုခွဲထွက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်.
Many ergonomic keyboard users are older people who have suffered from arm or wrist problems such as RSI (repetitive strain injury) and/or carpal tunnel syndrome. Ergonomic keyboards are much cheaper than the loss of work, or the weeks of expert physiotherapy, that often follow such afflictions.
Having enjoyed two courses of physiotherapy, I urge people to use ergonomic keyboards before problems arise, rather than afterwards.
You’reaDell user so you could consider another Dell keyboard. ဥပမာအားဖြင့်, the Dell SK-8115 has an excellent reputation, and you can find new ones cheap (ဥပမာ £6.99) ebay မှာ. Dell’s newer keyboards, ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် KB-212-B and similar models, are also serviceable alternatives.
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, I’d suggest visiting shops that sell keyboards, such as Maplin and Currys PC World, to tryafew and pick one you like. Both Logitech and Microsoft offer lots of options. အဆိုပါ Logitech M20 is reasonably priced at £18.99, includingamouse. The Microsoft equivalent is the Wired 600 at £24.99, including mouse.
If you wantaflat, Apple-style keyboard, look at the Cherry Strait JK-0300GB ကို at £29.99. There’s alsoaCherry Strait in အနက်ရောင် for £34.17. The wireless version, ထို Cherry DW 8000, costsabit more (£54.65) but still looks reasonable value. အနည်းဆုံး, it’s cheaper than the alternative from Matias (£84.98).
If you feel like investing in something more traditional, ထို Cherry G80-3000 is cheap (£60 or so) forakeyboard that with clicky keys, and would be my pick. The Corsair gaming keyboards – available at Maplin’s shops – are also worthalook. ရှိပါတယ်, ဟုတ်ပါတယ်, many more expensive options, ထိုအပါအဝင် Filco Majestouch-2 (£114) နှင့် Das Keyboard (£127.67).
Incidentally, you can still buy IBM Model M-style keyboards. IBM spun off its printer and keyboard businesses to form Lexmark, and when Lexmark moved to cheaper keyboards, some former employees carried on the old business as Unicomp. UK ရှိ, you can buy these and many other fine keyboards from The Keyboard Company. They’re the experts.
If you decide to try an ergonomic keyboard, the Microsoft Comfort range providesababy step forward. I started withaComfort Curve 2000 but today’s Microsoft Natural Ergo Keyboard 4000 (£36.48) isabetter choice. Afterawhile, I wanted to increase the split so I picked upanew Fujitsu KBPC E (£56.18, but I paid £30 on eBay). အချိန်ပို, the split naturally got wider, and I’m now ready to replace it withaKinesis Freestyle2 (£80.68), which has mechanical keys.
When the Wirecutter website looked for the best ergonomic keyboard, it picked the Microsoft Sculpt (£61.18 including mouse). The review providesagood guide to pickingakeyboard, and your personal preferences may lead you toadifferent conclusion – as mine did. သို့သော်, the Sculpt isagood choice for anyone who doesn’t know what to buy, and is willing to adapt to an ergonomic layout.
I’m not too fussy about mice nowadays, and tend to use whatever comes with the PC or keyboard. When they fail, I pop intoalocal shop and buy something in the £10 to £15 range. I’m currently using an HP 5-button Optical Comfort Mouse, and I do find HP’s Comfort Grip comfortable. ဒါပေါ့, both Logitech နှင့် Microsoft က also make decent mice, though most of them are wireless models.
Someone with smaller hands might well preferasmaller mouse design, ဒါပေမဲ့နောက်တဖန်, it’samatter of taste.
As before, the serious money is in gaming mice, which can cost over £100. I might be tempted by the Razer Abyssus (£34.99) or the fierce-looking Corsair M65 RGB (£45.50) with back-lighting, but I can’t see the point for my humble purposes, such as playing FreeCell.
Ergonomic mice have also passed me by, usually because they feel unnatural – at least at first – and cost silly money. သို့သော်, I’ve just noticed that Anker Vertical Ergonomic Optical Mouse prices start at around £10, so I’ll add one to my Amazon Basket.
Most gamers use corded mice and keyboards, and the accepted wisdom is that wired peripherals work better. With my typing and reaction speeds, I can’t tell the difference. သို့သော်, wired peripherals are generally more reliable, in that they never drop the Bluetooth connection, and they never run out of juice.
Under normal working conditions, your keyboard and mouse will not be very far from your PC. It should be possible to route the cables to avoid any snagging problems. ဒါကြောင့် အကယ်., I can’t see the point in paying extra for wireless versions.
သို့သော်, if distance isaproblem, it may be better to useawireless keyboard and mouse. လည်း, you may prefer wireless peripherals for other reasons, including aesthetics. That’s up to you.
သငျသညျဂျက်များအတွက်နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုတယ်ပါပြီ? ထိုသို့အီးမေး Ask.Jack@theguardian.com
Should I replaceaMacBook Air withaWindows laptop?
Are there any laptops suitable for high-speed typists?
40254	4 အပိုဒ်, ဂျက်မေးပါ, အင်္ဂါရပ်များ, ဂျက် Schofield, နည်းပညာ, ဗြိတိန်နိုင်ငံနည်းပညာ
← ဖုန်းဖော်ဆောင်ရေးရပ်တန့်ပါရန် BlackBerry ကို ! Google က Pixel ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း →